Otu esi etinye ihe nchọgharị Chromium na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
October 15, 2021 June 28, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1 – Wụnye Chromium na Snap
Nhọrọ 2. Wụnye Chromium na APT
Otu esi emelite ihe nchọgharị Chromium
Otu esi ewepu (wepụ) ihe nchọgharị Chromium
Chromium bụ ọrụ ihe nchọgharị mepere emepe nke na-achọ iwulite ụzọ nchekwa, ngwa ngwa na kwụsie ike maka ndị ọrụ niile ga-enweta webụ ahụ. Nke chromium A na-eji codebase eme ihe n'ọtụtụ ebe. Microsoft Edge, Opera, na ọtụtụ ihe nchọgharị ndị ọzọ dabere na koodu ahụ. Otu akụkụ kachasị ewu ewu nke Chromium bụ na ọ na-enye ohere nkesa Linux chọrọ sọftụwia mepere emepe ka ọ kwado ihe nchọgharị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Chrome.
Na njedebe nke nkuzi, ị ga-amụta Otu esi etinye ihe nchọgharị weebụ Chromium na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa gị.
Iji melite akaụntụ sudo dị adị ma ọ bụ ọhụrụ gaa na nkuzi anyị Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Ubuntu.
Iji wụnye Chromium nke ọma, ị ga-achọ ịwụnye ngwugwu ndị a; gbaa iwu a ma ọ bụrụ na ị maghị; ọ gaghị emerụ gị usoro.
Enwere ike itinye ihe nchọgharị webụ Chromium site na njirimara ngwugwu snap na Ubuntu. A na-ekesa ma na-echekwa ngwungwu Chromium snap Canonical, onye nwekwa ma wulite nkesa na ngwanrọ Ubuntu.
Nke mbụ, mepee ọnụ Ubuntu gị site na menu ngwa ma ọ bụ jiri ụzọ mkpirisi ahụigodo (Cltr+Alt+T).
Na-esote, tinye iwu snap a ka ịwụnye Chromium ihe nchọgharị weebụ.
Nhọrọ nke abụọ maka ndị na-achọghị iji njirimara ngwungwu snap bụ ịwụnye Chromium ihe nchọgharị weebụ site na iji .deb dị na ebe nchekwa Ubuntu ndabara.
N'ime ọdụ Ubuntu gị, gbaa iwu a ka ịwụnye ihe nchọgharị Chromium na Ubuntu 20.04.
Ozugbo arụnyere, kwado nrụnye ahụ site n'ịkwado site na iwu amụma apt-cache.
Dịka ekwuru n'elu, etinyere ụdị kwụsiri ike kachasị ọhụrụ na sistemụ Ubuntu gị.
Na nrụnye zuru oke, ị nwere ike ịgba Chromium n'ụzọ ole na ole.
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ chromium & iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Ekele, ị rụnyela ihe nchọgharị Chromium nke ọma.
Maka ndị ọrụ tinyegoro Chromium site na iji njirimara Snap, jiri iwu na-esonụ iji nweta ume na-akpaghị aka ma wụnye mmelite ọ bụla dị maka ngwa niile arụnyere na ọnyà.
Iji wepụ ihe nchọgharị ahụ, mebie iwu njedebe ndị a:
Rịba ama na nke a ga-ewepụ ihe ndabere ọ bụla etinyere na mbụ.
Ka iwepu Chromium site na iji njirimara Snap, jiri iwu na-esonụ.
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala ịwụnye ihe nchọgharị weebụ Chromium na Ubuntu 20.04 n'ụzọ abụọ wee wepụ ngwugwu ahụ ma ọ bụrụ na achọghịzi ya. Ihe nchọgharị Chromium bụ nhọrọ mepere emepe mara mma nke na-enye ohere nkesa Linux chọrọ sọftụwia mepere emepe ka ọ kwado ihe nchọgharị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Chrome. Ndị na-ekesa Linux nwekwara ike iji Chromium dị ka ihe nchọgharị webụ nke ndabara n'ọnọdụ Firefox.
Categories Ubuntu Tags Chromium Nchọgharị, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo